Qori tuurka isku aadka Champions league iyo Europa League oo maanta la soo saaray… – Hagaag.com
Qori tuurka isku aadka Champions league iyo Europa League oo maanta la soo saaray…
Posted on 19 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Qori tuurka Wareega sideed dhamaadka Champions League-ga ee xilli ciyaareedka 2020-2021, oo maanta oo Jimce ah lagu qabtay magaalada Nyon, Switzerland, waxaa ka dhashay iska horimaadyo dheelitiran oo xiiso leh, sida Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain.
Bayern iyo Paris Saint Germain ayaa ku kulmay finalka koobkii ugu dambeeyay ee tartanka, Bayern ayaana taajka hanatay, hadana waa mar kale oo ay isku arkayaan wareega 8da.
Real Madrid oo ah kooxda heysata rikoorka inta jeer ee lagu guuleysato koobka horyaalada Yurub oo gaaraya 13 jeer, ayaa fooda is dari doona kooxda Liverpool oo iyadu hanatay horyaalkii ka horeeyey kii ugu dambeeyay.
Kooxda reer England ee Manchester City, oo dooneysa inay ku guuleysato horyaalnimada markii ugu horeysay taariikhdeeda, ayaa wajaheysa tijaabo adag oo Jarmalka ah, madaama ay ku dhacday Borussia Dortmund, oo weerarkeeda uu ku jiro xiddiga da’da yar Erling Haaland.
Ciyaarta kale, sideed dhammaadka, Porto – oo Juventus ka saartay inay u soo gudubto wareegan ayaa waxay la kulmi doontaa Chelsea, oo afgembi u riday Atletico Madrid oo ah hoggaamiyeyaasha Horyaalka Isbaanishka, wareegii 16-ka.
Isku aadka wareega semi-finalka tartanka ayaa sidoo kale maanta loo qori tuuray, halkaasoo kooxdii ku guuleysata iska hor imaadka u dhaxeeya Bayern iyo Paris Saint Germain ay la kulmi doonaan kooxdii ka soo baxda iska hor imaadka u dhaxeeya kooxaha Man City iyo Dortmund, sidoo kale kooxdii badisa iska horimaadkii Real iyo Liverpool ay ku dhici doonto kooxdii ka soo baxda Porto Iyo Chelsea.
1- Manchester City x Borussia Dortmund
2- Porto x Chelsea
3- Bayern Munich v Paris Saint-Germain
4- Real Madrid x Liverpool
Kulamada lugta hore ee wareega sideed dhamaadka waxaa lagu qaban doonaa 6 iyo 7da bisha April garoomada kooxaha koowaad lagu xusay, halka wareega soo celinta la qaban doono 13 iyo 14 isla bishaas. garoomada kooxaha tartamaya.
Marka laga hadlayo labada kulan ee wareega koowaad ee semi-finalka, waxay noqon doonaan 27 iyo 28 bisha soo socota, wareega hore ayaa la qaban doonaa afarta iyo shanta ee bisha soo socota ee May.
Ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka ayaa lagu qaban doonaa 29-ka May garoonka ciyaaraha ee “Ataturk” ee ku yaal magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Dhinaca kale Wareega sideed dhamaadka iyo semi-finalka koobka Horyaalada Yurub (Europa League) ee 2020-2021, oo Jimcihii lagu qabtay magaalada Nyon, Switzerland, waxaa ka dhashay iska hor imaadyo sidoo kale xiiso badan.
Isku Aadka Wareega Sideed dhamaadka:
1- Granada x Manchester United
2- Arsenal x Slavia Prague
3- Ajax x Roma.
4- Dynamo Zagreb x Villarreal.
Ciyaaraha wareega koowaad ee sideed dhamaadka waxaa la qaban doonaa sideeda bisha soo socota oo lagu qaban doono garoomada kooxaha hore loo soo sheegay, halka wareega labaad la qaban doono 15ka isla bishaas garoomada kooxaha tartamaya.
Labada kulan ee Semi-finalka wareega koowaad waxaa la qaban doonaa 29-ka bisha soo socota, halka wareega soo laabashada la qaban doono 6-da May.
Ciyaarta ugu dambeysa ee tartanka ayaa waxaa la qaban doonaa 26-ka May, oo lagu qaban doono magaalada Gdansk ee Poland.